CL: Kooxda Monaco oo guul ka gaartay Borussia Dortmund oo gurigeeda joogta kulankii xalay baaqday… + SAWIRRO – Gool FM
CL: Kooxda Monaco oo guul ka gaartay Borussia Dortmund oo gurigeeda joogta kulankii xalay baaqday… + SAWIRRO
Haaruun Yuusuf April 12, 2017
(Dortmund) 12 Abriil 2017 – Kooxda Monaco ayaa 3-2 uga badisay naadiga Borussia Dortmund oo ay marti u ahayd lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League, waxaana labo jeer shabaqa soo taabtay Kylian Mbappe.
Kulankan ayaa loo ballansanaa in la ciyaaro xalay, laakiin qarax la la eegtay baskii waday xiddigaha Borussia Dortmund ayaa dib loogu dhigay kulanka oo caawa loo ciyaaray.
Monaco ayaa iska lumisay fursad ay hoggaanka ciyaarta ku qaban kartay 17’daqiiqo waxaana gool ku laad loo dhigay bannaanka ka mariyey Fabinho, kaddib markii Sokratis Papastathopoulos uu dhulka dhigay Kylian Mbappe.
Laakiin kooxda martida ahayd ee Monaco ayaa goolka koowaad ee dheesha la timid 19’daqiiqo, waxaana kubbad uu bannaanka soo dhigay Thomas Lemar, ku taabtay shabaqa da’yarka Kylian Mbappe, kulanka ayaana sidaas ku noqday 1-0 looga gacan sarreeyey Dortmund.
Markale Monaco ayaa heshay goolka labaad ciyaarta, waxaana 35’daqiiqo madax iska dhaliyey difaaca Borussia Dortmund ee Sven Bender, kaddib karoos loo waday Radamel Falcao, kulanka ayaana lagu kala nastay 2-0 ay ciyaarta ku hoggaaminaysay naadiga reer France ee AS Monaco.
Qeybii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Borussia Dortmund ayaa dardar la soo laabtay, waxaana ay weeraro dhowr ah ku qaadeen goolka Monaco ilaa markii dambe ay ka dhaliyeen gool qurux badan.
Goolka ay dhalisay Borussia Dortmund ayaa yimid kaddib markii karoos la soo dhigay 57’daqiiqo oo uu cirib ku gudbiyey Aubameyang, oo uu goolhayaha ka tagay Shinji Kagawa goolka oo cidlo ah dhaliyey Ousmane Dembele, kulanka ayaana sidaas ku noqday 2-1 ay wali ku gacan sarreysay kooxda martida ahayd ee Monaco.
Weerar iyo weerar celi labada dhinac ah kaddib Monaco ayaa la timid goolka saddexaad ee ciyaarta waxaana baas gaaban oo uu ka dhex helay difaacyada Dortmund inta ula tagay goolwalaha dhinac ka dhigay 79’daqiiqo Kylian Mbappe, kulanka ayaana sidaas ku noqday 3-1 looga gacan sarreeyey Dortmund.
Borussia Dortmund ayaa gool kale iska soo guday waxaana kubbad uu soo dhigay Christian Pulisic oo uu ka helay bartamaha xerada ganaaxa 84’daqiiqo Shinji Kagawa inta u qabtay mid ka mid ah difaacyada Monaco, si qurux badan u dhaliyey, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-3 ay ku badisay kooxda Monaco ciyaartii ka dhacday garoonka Signal Iduna Park.
Borussia Dortmund ayaa looga fadhiyaa inay ka soo kabato saddex gool oo gurigeeda looga dhaliyey marka ay lugta labaad booqdaan Monaco haddii ay doonayso inay u soo baxdo afar dhammaadka Champions League, inkastoo ay labo gool dhalisay kulankan.
GOOGOOSKA: Atletico Madrid vs Leicester 1-0
PSG oo heshiis cusub u soo bandhigtay Serge Aurier